Ungazifihla njani izicelo kwifowuni yakho yeXiaomi | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Tutorials, Xiaomi
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, phakathi ku-Septemba, UXiaomi uhlaziye i-MIUI kwi-Global Beta ROM. Ndiyabulela kolu hlaziyo, abasebenzisi abanefowuni yohlobo lwesiTshayina ngoku banethuba lokwenza umsebenzi owaziwayo. Imalunga nokukwazi ukufihla usetyenziso. Le nkqubo ngoku ilula ngokwenene. Ke ngoko, sichaza indlela yokufumana.
Ngale ndlela, uya kuba nakho fihla izicelo ngokulula kwifowuni yakho yeXiaomi. Umsebenzi ngokuqinisekileyo ongaphezulu kwesinye ofumana uluncedo kwi-MIUI. Ke kulungile ukuba wazi amanyathelo oza kuwalandela kule meko.
Xa usenza le nkqubo, usetyenziso olufihla kwifowuni yakho, izakusa kwifolda kwiscreen sasekhaya. Nangona le folda iya kufihlwa ngalo lonke ixesha. Ukufikelela kuyo, kuya kufuneka senze isenzo ngokungathi besicofa isikrini kwaye kuya kufuneka singenise igama eligqithisiweyo lesicelo. Kodwa, into ekufuneka siyibonile kuqala yindlela yokufihla ezi zicelo kwiXiaomi.
Kuya kufuneka siye kuseto lwefowuni yethu yeXiaomi. Kulapho kufuneka sijonge icandelo lokuvimba isicelo okanye i-App Lock ukuba sinefowuni ngesiNgesi. Emva koko kuya kufuneka sijonge icandelo lezicelo ezifihliweyo. Apho ungangenisa usetyenziso ekufuneka ulifihlile, uya kufumana uluhlu lweapps.
Nje ukuba ungene, Ziza kube zifihliwe kwifolda esele siyikhankanyile. Ngaphandle kwamathandabuzo, umsebenzi onabasebenzisi abanefowuni yohlobo lwesiTshayina banokuthanda kakhulu. Lo msebenzi usebenze ukusukela ngoSeptemba.
Umzuzu ofuna ukuwenza ngalo, kwaye wenze isicelo esifihliweyo ukuze uyeke ukufihlwa, kuya kufuneka ulandele amanyathelo afanayo kwifowuni yakho yeXiaomi.
1 Ungazifihla njani iapps kwi-Android
Ungazifihla njani iapps kwi-Android
Ayizizo iifowuni zeXiaomi kuphela ezinokusebenzisa lo msebenzi wokufihla usetyenziso. Nakwezinye iimveliso kwi-Android singayisebenzisa, nangona amanyathelo ekufuneka elandelwe kule meko anokuhluka kuhlobo olunye ukuya kolunye. Kuxhomekeka kubume obusetyenzisiweyo kwifowuni. Kodwa ke sikushiya ngamanyathelo oza kuwalandela kwimeko yezinye iimveliso kwi-Android, ukuba ubucinga ngokufihla usetyenziso.
Ukuba unayo i-smartphone yeHuawei, kunokwenzeka fihla iapps ezifakwe kwifowuni ngokungagqibekanga. Indlela yokusebenzisa lo msebenzi ilula, kuba akukho nto inokufakwa. Inokufezekiswa kuseto kwisicelo uqobo. Amanyathelo ekufuneka elandelwe ngala:
Ngenisa icandelo lezicelo
Fikelela kusetyenziso olungagqibekanga
Cofa kwi-app ofuna ukuyifihla kwaye ukhethe ukhetho lokufihla
Kungenziwa ngezoapps eziza imigangatho kwifowuni. Ukuba ufuna ukwenza nezinye iinkqubo, esizifakileyo kamva, emva koko kuya kufuneka sisebenzise isiqalisi esithile, apho sinakho ukufihla zonke izicelo esizifunayo kwifowuni.
Kwimeko ye-Samsung, bane Indawo yemveli yokufihla ii -apps, ubuncinci kumaleko wayo weSamsung yamava. Kule meko, abasebenzisi kufuneka baye kwifowuni yesicelo sedrawer kwaye emva koko bacofe kwi icon yokukhetha. Emva koko imenyu yokufihla usetyenziso iya kuvela.
Kwinyathelo elilandelayo kufuneka nje phawula izicelo ofuna ukuzifihla emnxebeni. Ke ezi zicelo ziya kufihlwa kwangoko. Ukuba nangaliphi na ixesha ufuna ukufikelela kweziapps kwakhona, kunokwenzeka kwimenyu yokufihla, ngokulandela amanyathelo afanayo.
Kwimeko ye-BQ, asinayo indlela yemveli yokufihla ii -apps. Ke ngoko, ukuba siyafuna lo msebenzi, kufuneka sibhenele kwisicelo okanye kumndululi waso. Umthumeli uya kusivumela ukuba sizifihle ngokulula. Izinketho ezinjengeNova Launcher okanye i-Apex Launcher ziluncedo kule meko, ukuvumela ukuzifihla akukho ngxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Ungazifihla njani iiapps kwiXiaomi
Ndine-mi2 lite kodwa andilufumani ukhiye wesicelo okanye icandelo leLock Lock ngaphakathi kwe-SETTINGS. Ndinomdla wokuba ndikwazi ukufihla izicelo.
Ayikwazi kule Mi2 Lite? Ngaba ndenza into engalunganga?
I-Pokémon GO idlule kwi-1.000 yezigidi ezikhutshelweyo